Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi - China Zvigadzirwa Zvidimbu
Socket PPR yekutengesa muchina
Inoshanda Range Inotakurika socket fusion maturusi anoshandiswa ePP-R, PE, PERT, PB mapaipi uye fittings. Zvakanakira >> Yakasarudzika yedhijitari yekuratidzira skrini, zvinoenderana nezvakasiyana zvinhu, inogona kugadzirisa inoenderana tembiricha. >> Imwe yemhando inobviswa inotsigira kumira, kutenderera pane akawanda madirection. >> Seti yewakazvipira wrench, iri nyore kushandisa uye kutakura. >> Electronic akangwara kudzora system, inogona kuona otomatiki tembiricha muripo. >> Kuchenesa chinguva sig ...
SDC800 SDC1000 yakawanda angle band saha
Hydraulic inoshandiswa pombi yakaona yakakwenenzverwa kugadzirirwa kwezvikamu zvepaipi muPE, PP uye zvimwe zvinhu zve thermoplastic. Inoshandiswa kugadzirwa kwegokora, tee, muchinjikwa uye zvimwe zvekunyepedzera. Unyanzvi 630 kusvika 1200mm OD. Kucheka kona kunosvika kumadigiri makumi matanhatu nenomwe. Kuderedza chiyero chesaha kunodzorwa nemagetsi. Sezvakaita iwo ekumusoro-akamisikidzwa V- macampu anoshandiswa kubata zvikamu zvepombi munzvimbo. ZVINOSHANDISA uye zvinhu
Saddle Radius Bandi Vakaona-SRC630 SRC1000 SRC1200
Chinangwa chakavakirwa bhendi rekucheka redhiyo inodiwa kana kuwelding ichideredza tee uchishandisa SDM315, SDM630, SDM1200 saddle fusion muchina. Kana kana ruoko rwekugadzira pombi yakawanda. Inocheka pombi sekisheni kumagumo kune iyo chaiyo nharaunda yepombi pombi 63mm kusvika 315mm. >> Radiusheni saha inoshandiswa kucheka mapaipi ebazi anoshandiswa mukugadzira yekudzikisa tei uye manifolds. >> Imwe chete nzvimbo yekushandira inosanganisira yechinangwa-yakavakirwa bhendi saw uye nharaunda-inogadziriswa nzira yekubhururuka jig kune yakashinga bazi pombi 315mm kusvika 1000mm. >> Anocheka Pipe ...
Saddle Radius Bhendi Vakaona-SRC315
Chinangwa chakavakirwa bhendi rekucheka redhiyo inodiwa kana kuwelding ichideredza tee uchishandisa SDM315, SDM630, SDM1200 saddle fusion muchina. Kana kana ruoko rwekugadzira pombi yakawanda. Inocheka pombi sekisheni kumagumo kune iyo chaiyo nharaunda yepombi pombi 63mm kusvika 315mm. >> Radiusheni saha inoshandiswa kucheka mapaipi ebazi anoshandiswa mukugadzira yekudzikisa tei uye manifolds. >> Imwe chete nzvimbo yekushandira inosanganisira yechinangwa-yakavakirwa bhendi saha uye nharaunda-inogadziriswa nzira yekubhururuka jig kune yakashinga bazi pombi 63mm kusvika 315mm. >> Anocheka Pipe Di ...
SDC315 SDC630 mizhinji angle band saha
Hydraulic inoshandiswa pombi yakaona yakakwenenzverwa kugadzirirwa kwezvikamu zvepaipi muPE, PP uye zvimwe zvinhu zve thermoplastic. Inoshandiswa kugadzirwa kwegokora, tee, muchinjikwa uye zvimwe zvekunyepedzera. Unyanzvi 90 kusvika 315mm OD. Kucheka kona kunosvika kumadigiri makumi matanhatu nenomwe. Kuderedza chiyero chesaha kunodzorwa nemagetsi. Sezvakaita zvisungo zvetambo zvinoshandiswa kubata zvikamu zvepombi munzvimbo. ZVINOSHANDISA uye zvinhu
Technical Data Sheet: Professional pombi yekucheka muchina, yakanyatso cheka kucheka uye riwedzere basa nyore kutakura. Kurema kwemuchina wese i7,5 kg. Iyo 220 modhi inogona kutema mapaipi ari pakati pe15mm ~ 220mm muhupamhi. Ukobvu hwemadziro hwepombi dzesimbi ndeye 8mm, ukobvu hwepombi dzeplastiki ndi12mm, uye ukobvu hwesimbi isingaite i6mm. Hapana ruzha uye hapana spark munguva yekucheka. Iyo yekucheka pamusoro inotsvedzerera isina burrs, iyo yekushandira haina kuremara, uye yekumhanyisa kumhanya iri ...
Plastiki Ruoko Extruder
Tekinoroji Dhata Sheet: Model: SDJ3400 Voltage: 220V Inowedzeredza Magetsi Simba: 1300W Metabo Hot Mhepo Simba: 3400W Lesiter Welding Rod Kupisa Simba: 800W Kuwedzeredza Vhoriyamu: 2.5kg / h Welding Rod Dhayamita: ф3.0mm-4.0mm, 5.0mm inogona kuva yakagadzirirwa Ruoko extruder pfuti inowanzo shandiswa kutungidza HDPE, PP, PVDF uye zvimwe zvinopisa zvinonyungudika zvinhu muzvirongwa senge epurasitiki matangi emvura, mapaipi epurasitiki, midziyo yepurasitiki nemashiti epurasitiki. Model SDJ3400 Voltage 220V ± 5% Frequency 50 / 60Hz Hot Mhepo Blower ...
Kushanda uye Feature Muenzaniso: SUDG800 Voltage: 220V / 110V Simba: 800W / 1000W Frequency: 50 / 60Hz Welded Material: PE / PP / PVC / EVA / ECB Welded Material Ukobvu: 0.2mm-1.5mm Silicon kumanikidza roller uye simbi yekumanikidza roller ndeye sarudzo. Mhangura inopisa wedge uye simbi inopisa wedge inosarudzika. Kaviri inopisa wedge default uye imwechete inopisa wedge sarudzo. Unyanzvi Dhata Sheet: Model SUDG800 Tsananguro Geomembrane Welding Machine Voltage 220V (Yakasarudzika Inogamuchirwa) Kakawanda 50 / 60hz Simba 8 ...
Kushandisa uye Feature Electrofusion Welding muchina yakakodzera yekubatanidza Pe mapaipi uye fittings pamwe nekubatanidza ayo anoshandiswa gasi nemvura. 1.Design uye zvinoenderana ISO12176 Electro-Fusion welder dzakawanda mwero. 2.High level MCU inoshandiswa senge yekudzora musimboti, yakashongedzwa neLCD kuratidza, ese maWelding parameter anogona kuratidzwa. 3.Light uremu, nyore kushanda. 4.By chaiyo-nguva yekutarisa weld chinzvimbo, chisina kujairika kutenderera maitiro anogona kumiswa munguva pfupi. 5. Yakavakwa mu ...
Kushanda uye Chimiro 1.Welding Rudzi: yakatwasuka weld uye rolling pombi. PLC yekubata-pani yekudzora sisitimu, inokwanisa kugadzirisa otomatiki kudziya tembiricha, nguva uye kumanikidza zvinoenderana nematanho ezvinhu zviri kugadziriswa. 2.Control system Nokia PLC, 7-inch color inobata skrini-Nokia. 3.Brand-nyowani yakasanganiswa furemu, yakanyatsovimbika nzira yekufambisa, yakadzikama pabasa uye iri nani mu pe ...